Fiainana nandritra ny valan’aretina: Antsafa nifanaovana tamin’i Eaten Fish, mpanao sariitatra mpitsoa-ponenana teo aloha, natao sesitany · Global Voices teny Malagasy
Mampitaha ny fahefan'ny maro-an'isa sy ny vitsy-an'isa ny asakantony
Voadika ny 05 Oktobra 2021 3:44 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Português, Español, عربي, English
Ali Dorani manao sariitatra mampiseho ny maro an'isa sy ny vitsy an'isa. Sary nahazoana alàlana
Ilay mpanao sariitatra Iraniana Ali Dorani, izay manana solon'anarana hoe Eaten Fish, dia iray amin'ireo mpanao sariitatra sivy notolorana famatsiam-bola hanatontosany ny asany avy amin'ny Fritt Ord Foundation, any Norvezy, ho fankasitrahana ny asany tamin'ny fampiasana ny fanarabirabiana ho fomba fanehoana an-tsary sy fitaovana fanakianana eo amin'ny fiarahamonina.
Nitady fialokalofana tany Aostralia i Ali Dorani tamin'ny taona 2013 saingy nafindra tany amin'ny Nosy Manus izy, toby fihazonana ivelan-tsisintany any Papouasie-Nouvelle-Guinée, ary tany izy no noterena hijanona ho mpitsoa-ponenana nandritra ny efa-taona talohan'ny namelana azy hifindra tany Norvezy indray tamin'ny volana Desambra 2017 tamin'ny alàlan'ny famatsiam-bola avy amin'ny Tambajotran'ny Tanandehibe Fialokalofana Iraisam-pirenena.
Niparitaka be ny sariitatra ataony izay maneho ny tolon'ny mpitsoa-ponenana ao Manus. Tamin'ny taona 2016, nanolotra azy ny Loka amin'ny Herimpo Hamoaka Sariitatra ho an'ny asany ny Tambajotran'ny Mpanao Sariitatra Iraisam-pirenena.
Nosy Manus, sariitatra nataon'i Eaten Fish. Nahazoana alàlana.
Tamin'ny taona 2018, niantsafa [mg] tamin'i Ali Dorani mikasika ny zava-tsarotra nodiaviny tamin'ny naha-mpitsoa-ponenana azy tany Manus nankany amin'ny fiainam-baovaony tany Norvezy ny Global Voices. Niverina nifandray taminy izahay mba hamantarana momba ny zavakanto farany nataony izay nanolorana azy ny famatsiam-bola, ny zavatra niainany nandritra ny valan'aretina coronavirus, ary ny asany tao anatin'ny telo taona.
Nanao fampirantiana marobe tany amin'ny tanàndehibe samihafa any Norvezy aho sy tany amin'ny firenena hafa toa an'i Alemaina sy Soeda ihany koa. Nahazo mpijery marobe aho izao. Olona sy mpianatra mihoatra ny 15.000 no nijery ireo fampirantiako, ny lahateniko ary ny resadresako.
Tsy mampino ny olona ny mandre ny fanenjehana olona ao anatin'ny sisintanin'i Aostralia. Fantatry ny ankamaroan'ny olona fa iray amin'ireo firenena malalaka indrindra eto amin'izao tontolo izao i Aostralia ary tsy fantatr'izy ireo ny momba ny foibe fifindra-monina ao Aostralia ary tsy fantany izay ataon'ny governemanta Aostraliana amin'ireo ankizy an-jatony izay tazonin'izy ireo ao anaty fefin'ny fonja.
Nanoratra momba ny nanakorontanan'ny valan'aretina ny fiainany tamin'ny naha-mpanakanto natao sesitany azy sy amin'ny maha-mpitsoa-ponenana azy teo aloha izay niantehitra tamin'ny lanonam-bahoaka mba hizarana ny tantarany sy ny asakantony izy:
Amin'ny maha mpanakanto mahaleo tena ahy dia nanimba be ny asako ny valan'aretina satria mila mampiseho amin'ny besinimaro ny sary ataoko aho ary mila miresaka amin'ny besinimaro sy mizara sariitatra amin'izy ireo saingy tena nametra ahy mafy ny valan'aretina. Ka taorian'ny valan'aretina dia tsy afaka nandeha firy aho ary tsy afaka nanao fampirantiana. Mahazo vola aho amin'ny fanaovana sariitatra sy ny fanaovana fampirantiana amin'ny fivarotana ireo sariitatra sy sary hosodoko; (saingy) nampiato ny zava-drehetra ny valan'aretina.
Avy eo, tsy maintsy nitady asa maharitra aho, (saingy) saika tsy nahita asa vaovao aho noho ny valan'aretina.
Ny vitsy an'isa sy ny maro an'isa.
Vao tsy ela akory izay izy no nolazaina momba ny fifaninanana nokarakarain'ny orina mpanasoa The Fritt Ord momba ny lohahevitry ny maro an'isa sy ny vitsy an'isa. Tsaroany fa sahirana mihitsy izy tamin'ny fanakarana ilay lohahevitra:
Sarotra dia sarotra tokoa ny miresaka momba ny vitsy an'isa sy ny maro an'isa satria ohatra, tsy tena fantatro loatra ny lohahevitra tokony handikako ireo teny roa ireo. Misy ve ny vitsy an'isa na maro an'isa sa midika hoe mifanohitra izy ireo? Azontsika tsara ve ireo teny roa ireo? Sa azontsika tsara hoe inona marina ny dikan'ny hoe vitsy an'isa na ny maro an'isa? Sambany aho tonga tamin'ny zavatra toy izany.
Roa andro fotsiny no niasany tamin'ny fandefasana valiny. Nohazavainy ny fomba namoronany ny mariky ny tanamasoandro hanehoana ny zanak'olombelona.
Nosafidiko ny sarina tanamasoandro satria voninkazo manana voa an-jatony ao anatiny ny tanamasoandro izay maneho ny Fiarahamonina amin'ny sariitatra ataoko. Nataoko sary ny tanamasoandro miisa 7 tanaty trano makarakara izay maneho ny kaontinanta samihafa ary izany no nantsoiko hoe vitsy an'isa …
Ary nataoko ny sarina tanamasoandro iray tetsy ankilany izay maneho ny maro an'isa. Maneho vondron'olom-bitsy izay manam-pahefana hifehy ny tontolo sisa ny tanamasoandro mainty sy fotsy ary… Ka hitanareo fa manana ny lakile ny tanamasoandro mainty sy fotsy ary voahidy ny ambin'ireo tanamasoandro ao anaty trano makarakara. Koa satria manana ny fahefana ny tanamasoandro mainty sy fotsy dia antsoiko hoe ny maro an'isa izy ireo ary ny sisa amin'ireo tanamasoandro izay tsy manana fahefana no antsoina hoe vitsy an'isa.
Nanome aingam-panahy azy hanohy ny tetikasany tsy mety vita ilay loka:
Tena narisika aho hamita ireo bokiko ary hamoaka azy ireo taorian'io loka io.
Nanoratra boky momba ny fiainako sy ny tantarako tao amin'ireo toby fitazonana mpitsoa-ponenana any Aostralia sy ny toby fitazonana mpifindra-monina any Papouasie-Nouvelle-Guinée aho ary manoratra boky tantara an-tsary iray hafa ihany koa momba ny fiainako tany Norvezy ary tena mazoto aho izao hamita ireo boky roa ireo.
Manana torohevitra lehibe izy ho an'ireo mpanakanto namany izay miady mafy mba hahavelomana mandritra ny valan'aretina:
Te hiteny amin'ny namana (mpanakanto) hafa aho fa tsy tokony hitsahatra hanandrana izy ireo, tsy tokony hitsahatra hikaroka ary tsy tokony hatahotra mihitsy ny hizara ny heviny, indrindra ireo mpanao sariitatra.